[Somaliland News Network]
SOMALILAND NEWS NETWORK "SNN".
Posted at 03:35 pm by SNN reporter RAMBO
CIIDAMADA QARANKA SOMALILAND OO KU KAABIGA U FADHIISTAY LAASCAANOOD:
CIIDAMADA <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />SOMALILAND OO SHALAY KAABIGA U FADHIISTAY MAGAALADA LAASCAANOOD<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
�Ruqaansiga Ciidamada Somaliland waxa uu sababay inay dib u gurtaan Maleeshiyadii Majeerteeniya�
aascaanood(SNN)-Ciidamada Qaranka Somaliland, ee ku sugnaa Jiidda hore ee degmada Yagoori ee gobolka Sool, ayaa subaxnimadii hore ee shalay ku ruqaansaday duleedka magaalada Laasaanood oo ay si rasmi ah u dul fadhiisteen.
Sidaa waxa SNN u sheegay ilo Milatari oo rasmi ah, waxaana ay ilahani intaa ku dareen in gutooyiinkan Qaranka Somaliland ee ruqaansaday, ay hadda gaadheen meel aan wax badan ka dheerayn magaalada Laascaanood. Ruqaansigan Ciidamada Somaliland kaabiga ugu fadhisteen magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sababtay inay dib u gurtaan Maleeshiyadii Maamulka Majeerteeniya goobihii ay hore u fadhiyeen, gaar ahaan sida SNN loo sheegay Maleeshiyadii fadhiday dhinaa galbeedka Magaalada ayaa iyagu dib u gurtay oo difaac ka galay Garoonka Diyaaradaha ee ku yaal dhinaca Koonfureed ee Magaalada Laascaanood.
Ciidankan ku ruqaansaday magaalada Laascaanood, ayaa waxa uu cabsi xoog leh ku keenay Maleeshiyada Majeerteeniya, sidaas oo kale waxa ay Ciidamada Somaliland cabsi ku abuureen dadweynaha magaalada degen oo ka cabsi qaba dagaal dhex mara labada Ciidan, waxaana la sheegayaa in durba ay magaalada Laascaanood ay ka bilaabantay xamaam urursi ay dadweynuhu kaga diyaar garoobayaan dagaal dhaca.
SNN Correspondent Hargeysa Somaliland
Mohamed H. Jama (Rambo)
Posted at 01:24 am by SNN reporter RAMBO
Faallo: Ciyaartii Saaxiibtinimo ee Kooxda Ciidanka Somaliland iyo Kooxda Ciidanka Ethiopia :
K ooxda Ciidanka Qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa Qaranimada iyo haybadda Haykalka Dawladnimo ee Somaliland ku muujiyey Ciyaar Saaxiibtinimo oo dhawaan dhex marety iyaga iyo Kooxda Kubadda Cagta ee Ciidamadda Dalka Ethiopia oo uu ka dhexeeya xidhiidh adag oo lagu tilmaamo mid waxtar badan ka leh Nabad-gelyadda Geeska Afrika.
Kooxda Ciidanka Somaliland ee GAASHAAN.
Kooxda Gaashaan ee Ciidanka Qalabka sida ee Somaliland ayaa ciyaartaas ku soo bandhigay ciyaar si wacan loo ciyaaray oo ay kujirto xirfad iyo Astaan muujinaysa Qaranimadda dhabta ah iyo dedaalka dadka reer Somaliland ee ay Dunnida iska indho tireyso muddo ku dhow 13 sanno.
Ciyaartan oo dadaka Hargeysa ku nooli ay ka soo qatb galeen ayaa Tarabuunadda la wada buuxiyey iyadoo yar iyo weynba aan loo kala hadhin. Ciyaartaas oo muujinaysay Saaxiibtimadda labada dal waxay guushii ku raacday Kooxdii Ciidamadda Somaliland ee Gaashaan oo Hal iyo Eber ku dirtey Kooxdii Ciidanak Ethiopia.
Kooxda Ciidanka ETHIOPIA.
Waxay ahayd saxansaxaddii Guushii ugu horeysay ee ay dadka Somaliland oo ku faana Qaranimadoodu ay ku raaxaystaan maalintaas iyagoo ay tustay Midhaha dedaalka ay ugu jiraan inay ku biiraan Caalamka xorta ah.
Posted at 08:44 am by Rambo2003
MADAXWEYRAYAALE OO KA QAYB GALAY MUNAASIBADII 10AAD EE LA KA SOO WAREEGTAY AAS-AASKII CIIDANKA QARANKA
MADAXWEYRAYAALE OO KA QAYB GALAY MUNAASIBADII 10AAD EE LA KA SOO WAREEGTAY AAS-AASKII CIIDANKA QARANKA<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
�Haddii in badan la dafirayay dalkan <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Somaliland, waxa aan idiinku bushaaraynayaa in dhaqso dalkani u heli doono saaxiibo badan oo baahiyihiisa wax inagala qabata� Madaxweyne Rayaale."
argeysa (SNN)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Md. Daahir Rayaale Kaahin, ayaa sheegay inuu rajoweyn ka qabo mustaqbalka dhow in dalka Somaliland uu ka mid noqdo Qaramada Beesha Caalamka.
Madaxweyne Rayaale oo ka hadlayay saaka munaasibad lagu xusayay sannad guurada 10aad ee kasoo wareegtay Aasaaska Ciidanka Qaranka Somaliland, waxa uu sheegay in indhaha Beesha Caalamku qabteen xilligan horumarka iyo dawladnimada uu gaadhay dalka Somaliland, oo ay hore isaga indho tiri jireen, iyaga oo xooga saarayay dib-u-dhiska dalkii Koonfurta Soomaaliya, taas oo uu Madaxweynuhu tilmaamay in beesha Caalamku quus ka joogto.
�markii aanu la soo noqonay Madax banaanidayadii (1991kii), in badan bay Beesha Caalamku indhaha ka lalinaysay guusha ay Somaliland gaadhay oo guul darrada ka socoto Soomaaliya ay daba ordayeen. Waxaanse maanta idiin sheegayaa in Beesha Caalamku fikirkoodaas hore ay kasoo jeedsatay oo ay qiimo weyn siinayso guusha ay ummadda Somaliland gaadhay� ayuu yidhi Madaxweyne Rayaale.
Madaxweyne Rayaale waxa uu sheegay in uu rajayanayo in dalka Somaliland si dhaqso u heli doono dalal saaxiibo dhow ah oo wax kala qabta baahiyihiisa. �Haddii in badan la dafirayay dalkan Somaliland, waxa aan idiinku bushaaraynayaa in dhaqso dalkani u heli doono saaxiibo badan oo baahiyihiisa wax inagala qabata, Insha Allaahu� ayuu yidhi Md. Rayaale. Haseyeeshee Madaxweynuhu carabka kuma dhufan kuwa ay yihiin Saaxiibada uu sheegay.
Madaxweyne Rayaale, oo ka hadlayay Siyaasadda Xukuumaddiisa ee ku wajahan Ciidanka Qarnaka, waxa uu sheegay in uu Mudnaanta kowaad siinayo Ciidanka Qaranka iyo dhismihiisa �Go�aanka Xukuumaddu waxa weeye in mudnaanta kowaad aanu siino Ciidanka Qaranka, oo xag kasta oo aanu wax uga qaban karno ka qabano, wax alla wixii qarankani dhiiqo, mudnaanta kowaad ayaanu siinaynaa Ciidanka Qaranka� ayuu yidhi Md. Rayaale isaga oo intaa ku daray inuu kalsooni weyn ku qabo in Ciidanka Qaranka Somaliland, ka adag yahay difaaca dalka, �Waxaan kalsooni weyn ku qabaa in aad guul kasoo hoyn doontaan difaaca dalkan mar haddii aynaan innagu duulayn oo difaacno Qaranimadeena iyo jiritaankeena Illaahayna garab wuu ina siinayaa cidkastana waynu ka guulaysanaynaa� ayuu yidhi Madaxweyne Rayaale isaga oo si gaar ah ugala hadlaya Ciidanka Qaranka sugitaanka Xuduudaha dalka.
Ugu dambayn, waxa uu Madaxweynuhu ugu hambalyeeyay Ciidanka Qaranka munaasibadda loo sameeyay Aas-aaska Ciidanka Qaranka Somaliland.
Munaasibaddan oo lagu qabtay Taliska Guud ee Ciidanka Qaranka Somaliland, ee Magaalada Hargeysa, waxa ka qayb galay Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland, Md. Ismaaciil Cumar Aadan (Boos), Taliyaha Ciidanka Qaranka, Md. Nuux Ismaaciil Taani, Masuuliyiin ka tirsan Xafiiska diblomaasiyadeed ee dawladda Itoobiya ay ku leedahay Magaalada Hargeysa, iyo saraakiil sare oo ka tirsan Ciidanka Qaranka.
Waxa kale oo isna Madaxweynaha ka hor halkaasi khudbad ka jeediyay Wasiirka Gaashaandhiga ee Somaliland, Md. Ismaaciil Aadan Cumar (Boos), oo shaaca ka qaaday in Ciidanka Somaliland diyaar u yihiin in ay qaadaan tallaabo deg-deg ah oo lagu sugayo Xuduudaha Bariga Somaliland.
Wasiirku waxa uu sheegay in aan Cidanka Somaliland marnaba wax dhibaato ah u gaysanayn Magaalada Laascaanood iyo degaanada kale balse ay gaadhayaan Xuduudaha Bariga Somaliland.
�Laascaanood, inta aynu badbaadin karno weynu badbaadinaynaa, Dadkeeda haddii aanay la damcin dagaal, inagu burburin mayno oo ugu horeyn mayno. Laakiin Ciidankeena Xuduudaha dalka wuu sugayaa, Cabdillaahi Yuusuf Ciidamadiisu ha ka baxaan Laascaanood ama yaanay ka bixine.�
wasiir Boos, oo dhawaan kasoo laabtay jiidaha hore ee fadhiisimada Ciidanka Somaliland ee aaga Bari, oo uu ku tagay kormeer hawleed waxa uu sheegay in Ciidanka Somaliland, inkasta oo aanay xabad ridin haddana u diyaar yihiin in ay ku dhaqaaqaan tallaabada ay ku sugayaan xuduudaha dalka.
Wasiirka oo ka hadlayey faro-gelinta Maamulka Majeerteeniya ee uu Madaxda ka yahay Cabdillaahi Yusuf ku soo sameeyey Gobolka Sool, waxa uu yidhi; � markii muddo nabadgelyo lagu jiray ee Somaliland wax badan qabsatay waxa muuqatay ictiraafkii Somaliland soo dhawaaday iyo in Soomaaliya caalamkii ka daalay, taas waxa ay keentay in cadawgii Somaliland, Gardarooyin gaagaaban innagu soo qaaday oo Ciidamo laynoogu hanjabayo. Cidda innagu soo qaatay waa kuwa xasuus daran, waa Soomaaliyadii aynu kala soo noqonay xornimadeenii qaar ka mid ah. waa Soomaaliyadii aynu ka dagaalanay ee innaga o aan midaysan halkaynu marinay ogaydeen, oo markii xuduudaha lagu hubsadya aynaan aargoosi dambe ku qaadin ee aynu saamaxnay. Markii aynu tashanay ee Somaliland dib ula soo noqonay ee nabadgelyo helnay ayaa kii (Cabdillaahi Yuusuf) caynkaa ahaa intuu wixiiba iloobay ayuu weerar soo qaaday Cabdillaahi Yuusuf caqli xumadiisa�.
Waxa uu intaa raaciyey �Cabdillaahi Yuusuf wuu eedi doonaa gardarrada uu ku soo sameeyay Somaliland� Ugu dambayn, wasiir Boos waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan Ciidanka Qaranka Somaliland, xuska munaasibadda Aasaaska Ciidnaka awgeed.
Waxa kale oo isna halkaa ka hadlay Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland, Md. Nuux Ismaaciil Taani, isaga oo ka xogwarmaya Xaaladda Ciidankana waxa uu yidhi; �Duruufo badan oo wadanka lasoo gudboonaaday ayuu Ciidanka Qaranku ka samata bixiyay waajibaadkiisana kaga soo baxay sida Doorashooyinkii kala duwanaa ee dalku soo maray� ayuu yidhi Col. Nuux, isaga oo intaa ku daray �Iyada oo Ciidanka Qaranku la wadaago Ciidanka Booliska sugidda nabadgelyada gudaha, waxa u sii dheer inuu u xilsaaran yahay difaaca dalka iyo sugidda xuduudaha Qaranka.�
Col. Nuux,waxa uu sheegay in waajibaadka maanta horyaal Ciidanka Qaranku yahay sugitaanka xuduudaha dalka, �Waajibaadka Ciidanka Qaranka horyaala maanta waxa weeye sidii loo sugi lahaa xuduudaha Qaranka taana waanu ballan qaadaynaa� ayuu yidhi Col. Nuux, isaga oo intaa raaciyay in Cidanka Qaranku ka qayb qaato fidinta Maamulka iyo wax soo saarka dalka.
Mohamed H. Joma (Rambo)
Posted at 02:39 pm by SNN reporter RAMBO
MAYORKA HARGAYSA OO JAALIYADDA SOMALILAND KULA KULMAY WOOLWICH SOUTH EAST LONDON.
M aayarka Hargaysa Eng xuseen Mohamuud Jiciir iyo koox lasocotay ayaa shir la yeeshay Jaaliyada reer Somaliland ee ku nool Koonfurta bari ee London. Waxaa shirkaa ka soo qayb galay dadwayne badan oo reer Somaliland ah iyo Eng: Axmed Balayax iyo Ibrahim Rashid Gudoomiyaha ucid ee UK.
Shirkaa oo ku saabsanaa warbixin Xaaladda Maanta ay Somaliland mareyso iyo isku xidhka Qurbo jooga iyo dalka wuxuu u dhacay sedan.:
* Wuxuu maayarku ugu horayn Kawaramay Dawladaha Hoose iyo sidii ay
doorashooyinku u dhaceen.
* Wuxuu ka waramay sidii sharafta lahayd ee ay doorashooyinku u dhaceen iyadoo uu sheegay in ay hooyo iyo inankeedu kala galeen laba xisbi oo kala duwan. Waxa kale oo uusheegay in qabyaaladii lagu dhaafay doorashooyinkaa.
Waxa kale oo uu maayarku si buuxda uga waramay: waxyaalaha la gudboon ama soo wajahay intay xilka hayeen oo ay kamid yihiin.
* Golaha deegaanka
* mushaakilka ka haysta dhulka iyadoo aanuu xeer jirin
* Iyo qashinka iyo dawlada hoose iyada oo uu sheegay inaanay qalab haysan
* Waxa kale uu sheegaya inay dawladu dhaxashay dayn dawladihii ka horeeyay
* Iyo in ay dhaxleen shaqaalo la dulmiyay iyaga qaarkoodna aanay daacad ahayn ama sharcigaba garanayn.
Wuxuu mayorku sheegay in howlan hoos kuqorani yihiin kuwii adkaa waxna ay ka qabteen laakiin ay dawlada iyo shacbiga reer Somaliland u baahan yihiin inaanay la daalin sidii ay hawlahan wax noogla qaban lahaayeen.
1. xaga biyaha iyo laydhka
4. iyo in ay magaaladu sii fidayso taasina ay keentay in meelihiii dadwaynuhu yaraadeen.
5. iyadoo aanay dawlda hoose iyo ta gudihuba aanay sidiii la doonayay uwada shaqayn.
Maayarku wuxuu sheegay inaynu dal ahaan ku jirno xiligii barashada oo aynu dad ahaan iyo dawlad ahaanba aynu wali wax baranayno. Waxa kale oo uusheegay inay kutala jiraan sidii ay TOWN HALLS ama xafiisyo u dhisi lahaayeen isagoo qirtay inaanay kuwa fiicani imka jirin.
Iyagoo dhibaatooyinkaa iyo qaarbadan dhaxlay hadana wuxuu sheegay Maayarku inay waan waano iyo balan qaadyo ka haystaan hay ado badan oo ay ka Mid tahay UNDP. Kuwaas oo ugu balan qaaday inay waxla qabtaan horumarinta Magaalada. Maayarku wuxuu sheegay inay xafiisyo cusub ka dhiseen xaafadaha ay ka mid yinhiin AXMED DHAGAX, GACAN LIBAAX. Iyo iyagoo xafiisyo cusub sameeyay.
Wuxuu maayorku sheegay in ay dhibaato wayni dadka ka hayso xaga wadooyinka taasna waxaanu ka kaashanay dadwaynaha gaar ahaan jahliyada reer Canada. Wadooyinkaanu samaynay waxaa kamida wadada dhakhtarka daba marta ee sheek biliso hor marta.Iyo wadada Maansuur ilaa kaantaroolka oo la balaadhiyay. Iyo iyagoo wadooyinka OCTOBER dhameeyay. Iyo wadada Total ilaa iyo Hargaysa Stadium. Inta noo hadhayna waanu dadaali doonaa. Insha alaah.
Wuxuu maayarku sheegay inay dadaalayaan iyagoo sameeyay gawaadhi u khaasa hawshaa xashiishka.
Wuxuu maayarku sheegay inay qashinku hargayso ku batay sababtoo ah dadka oramada ah ayaa lacag yar dadwaynuhu siiyaa iyaguna duleedka magaalada ayay dhigaan.Iyo bacda oo ay dadku meel walba ku tuuraan taas oo aan u fiicnay caafimaadka, saxada iyo quruxba sababtoo ah meel walba way ku dhagtay.
Waxaa nagu dhacay dhibaato wayn oo dawladihii naga horeeyay ka tageen taasoo ama dad lahaa ama hayadaba. Laakin badi wanu bixinay.
Wuxuu Maayarku sheegay inay badaleen systemkii revenue ama habkii cashuur qaadista isagoo awood siiyay meelaha ay dawladu cashuurta ka ururiso. Wuxuu sheegay in ay aad guul uga gaadheen xaga cashuur ururinta taas oo usahashay inay daynta dalka iska bixiyaan.
Wuxuu sheegay in xeerka midaynta cashuurta 12, kaas oo ah in wax xadidan dawlad hoose oo kastaba lasiiyo. Xeerkaasu waxyaabo badan ayuu dawlada ka xanibay isagoo oo odhanaya magaalo kastaa waxay qaadanaysaa saami goan.
Wuxuu sheegay inuu xeerkaasu si kala duwan ula dhaqmo xga baayacmushtarka.
MAAYARKU WUXUU SHEEGAY IN UU JECLAAN LAHAA INAY DAKU FAHMAAN CASHUURTU FAAIDADA AY ULEEDAHAY DALKA IYO HORU MARINTA BULSSHADA.
Wuxuu maayarku sheegay inay wadaan land registration system kaas o dadwanaha iyo meelaha aan juqraafi ahaan ladagi Karin dadka u sheegaya. Kaas oo also guryaha ama jagooyinka magaalooyinka oo dhan galinaya DATO waxaa arintaa naga caawiyay hayado waxaanuu hore uga hir galay magaalada gabilay. Hargaysi
way ku xigi doontaa burcan waa next step.
Wuxuu sheegay inay sayladii ku sameeyeen shade ama hadh taas oo xoolihii iyo dadwaynihiiba hadhsadeen. Wuxuu maayarku sheegay inay taasi ahayd arintii ugu horaystay ee ay ka qabteen hargaysa taas oo ay dadwayne badani nagu caawiyeen nooguna duceeyaan.
Wuxuu maayarku sheegay inay samayn doonaan meelo xoolaha lagu qalo taasoo oo si habaysan wax u qalayaan ilaalinaya nadaafada magaalada.
Waxaa systemkaa hore u hir galiayay shirkada ku taalo magaalada burco taas oo qasha oo dibada u dhoofisa sidaas oo kale ayuuu mayarku rabaa inuu kadhigo meelahaas meelo private ah.
Waxa kale oo uu mayarku sheegay inuu meelaha hilibka, xashiishka ay ka dhigi doonaan private.
Wuxuu maayarku sheegay inay xeer hoosaad sameeyeen sida building, kaas oo dadka kala qaban doona.
Wuxuu maayarku wax nooga yara taabtay ujeedooyinkooda mustaqbalka.
* " Neat Hargaysa
* The improvement of water system
* Road improvement
* To improve town planning
* To provide basic service for all citicens like education, health and social
Ujeedooyinkoodu waxay kahirgaleen meelo badan oo dalka kamida walina waa loo guntan yahan sidii loo gaadhi lahaa dhamaystirkooda. Waxyaalha la qabtay waxaa kamida.
* Tacliinta waxaanu ku bilaabnay xaafada koodbuur
* Moderns marketing and shopping centres
* New city town halls and meeting rooms which has already started
* More offices including new 16 offices
* Drainage system where appropriate there some cities which has already
natural drainage system.
* Improvement of sewage (bulaacadaha)
* Garbage improvement
* infrastructure improvement
* Introducing sport centres
* Helping the sport sector which was not included the aims of previous
Wuxuu maayarku sheegay inuu Maayarka karabo qurbo jooga Somaliland inuu qof kastaa isku dayo sidii uu isugu xidhi lahaa wadankii hooyo iyo halka ay dagan yihiin wuxuu tusaale usoo qaatay isagoo isku xidhay HAYES oo ah xaafad London ku taala iyo GACNALIBAAX taas oo uu maayarkeedii la
kulmay isna waydaarsadeen xidhhiidh iyo balanqaadyo badan.
Wuxuu maayarku sheegay inay dalku isku mid yahay in wax kastaba ha haatee lagu dadaalo sidii saaxiib ama friends ugu samayn lahayn dalkeena isagoo sheegay inaanu magaalo kasta ooo dalka kamida wax u qabano.
wuxuu maayarku sheegay in ay jiri donaan equal opportunity( sinaan).
In la samayndoono DAB-DAMIS AMA KOOXDA DABKA kaas oo uu sheegay in aanuu dalkeenu haba yaraatee lahayn xataa caasimada hargaysa wuxuu maayarku sheegay in marka hargaysa dab ka dhaco lasoo qabqabto booyadaha wadooyinka maraya kuwaas oo hadhow dib loo siiyo kharashka ka baxay.
Wuxuu maayirku hadalkissii kugaba gabeeyay inanynu dhamaan dalka wax u qabano si iskaashi ah waxaanuu shhegay waxyaabaha ay hada caawimo uga baahan yihiin kuwaas oo kala ah.
* XAGA DAB-DAMISKA
* XAGA AMBLANCE
Markaa sikastaba hadaanu nahay jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool Woolwich waxanu ururinaynaa deeq lacageed oo arrimhaa loogu qabandoono dalka haddii aad xiisaynayso la xidhiidh :
Information Adviser BSS LearndirectLeicester UK
Posted at 08:46 am by Rambo2003
CIYAAR SAAXIIBTINIMO OO DHEX MARTAY KOOXO KA KALA SOCDAY CIIDAMADA QARANKA SOMALIALND IYO ITOOBIYA.
CIYAAR SAAXIIBTINIMO OO DHEX MARTAY LABA KOOXOOD OO KA KALA SOCDAY CIIDAMADA QARANKA SOMALILAND IYO ITOOBIYA
"Kooxdii ku Ciyaaraysay Magaca Ciidanka Qaranka Somaliland ayaa 1-0 ku adkaatay" .
argeysa(SNN)-Kooxda Kubadda Cagta Gaashaan ee ciidanka Qaranka Somaliland, ayaa 1-0 kaga badisay Kooxda Kubadda Cagta ah oo ka socotay Qaybta <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Bari ee Ciidanka Milatariga Itoobiya, oo ay ciyaar saaxiibtinimo ku dhex martay maanta Garoonka kubadda Cagta ee Hargeisa Stadium.
Ciyaartaas oo lagu maamuusayay Sannad guurada 11aad ee ka soo wareegtay aas-aaska Ciidanka Qaranka Somaliland, waxa daawashadeeda ka soo qayb galay Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland Col. Nuux Ismaaciil Taani, Madaxa Xafiiska Diblomaasiyadeed ee ay Itoobiya ku leedahay Somaliland Mr. Abdaja Daribsa, Masuuliyiin iyo Saraakiil ka kala socotay labada dhinac iyo dadweyne fara badan oo iyana ka soo qayb galay daawashada Ciyaartii maanta.
Ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan, waxa ay labada dhinac ku soo bandhigeen Ciyaar ay ka muuqatay khibrad iyo farsamo aad u heersaraysaa oo qancisay dadweynihii daawashadeeda ka soo qayb galay.
Daqiiqadii 9aad ee Nuskii hore ee Ciyaarta ayaa kooxda Ciidanka Qaranka Somaliland heleen goolka ay guushu ku raacday, oo u saxeexay Ciyaar yahanka magaciisa la yidhaahdo Aadan Maxamed Aadan (Daayeero) oo ka ciyaara Lambarka 1aad, waxaana ay ciyaartii labada Nusba ku dhammaatay 1-0 ay guushu ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca ciidaanka Qaranka Somaliland.
Waxa gebagebadii Ciyaarata labada kooxdooba guddoonsiiyay laba koob oo kala duwan iyo Bilado Taliyaha Ciidanka Qaranka Col. Nuux Ismaaciil Taani iyo Madaxa Xafiiska Diblomaasiyadeed ee dawladda Itoobiya u fadhiya Somaliland Mr, Abdaja Daribsa.
Taliyaha Ciidanka Qaranka Col. Nuux oo hadal kooban ka jeediyay munaasibadii uu koobabka ku kala guddoonsinayay labada kooxood ayaa waxa uusheegay in ciyaartan maanta ay daba joogtay kulan kan ka horreeyey oo ay labada kooxood ku yeesheen dalka Itoobiya, taas oo ay guushu raacday Kooxda Itoobiya halka maantana ay badisay Kooxda Somaliland �Balse� ayuu yidhi Col. Nuux
�Badistu faa�iido malaha, waxa muhiim ah saaxiibtinimada iyo isu dhawaanshaha labada ciidan ee wallaalaha ah� waxaana uu intaa raaciyay mahadnaq uu ujeediyay Kooxda kubada Cagta ee Itoobiya, isaga oo yidhi �Waxaan aad ugu mahadnaqayaa Kooxda Ciidanka Itoobiya ee halkan angu soo booqatay ee wakhtigoodii soo dayacday, ciyaaruhu Caafimaadka kasokow xidhiidhka dhallinyarada ayay hagaajiyaan, waxaan rajaynayaa ciyaarahan iyo ciyaaro kale in ay dhici doonaan mustaqbalka siina xoojin doonaan xidhiidhka labada ciidan iyo labada dawladoodba.�
Waxa isna munaasibaddaa hadal ka jeediyay, Wasiir ku-xigeenka Macdanta iyo Biyaha Md. Yuusuf Ciise tallaabo, oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay Ciyaarta saaxiibtimo ee dhexmartay labada Ciidan ee Somaliland iyo Itoobiya, �Waxa sharaf weyn u ah dowladda Somaliland in maanta la wada loola oo bilado la kala helo, dalkana (Somaliland) horraysiyo dambaysaba taariikhiyan waxa uu ahaa midhiihii Itoobiya, Eebbana waxaan ka baryayaa intaa taariikhda adduunka ka hadhay inay wanaag ku dhammaato. Waxa kale oo aan Illaahay ugu mahadnaqyaa annaga oo wada dhuumanayna in aanu Itoobiya tagnay oo aanu soo noqonay annaga oo ragga oo libaysan oo hubaysan� ayuu yidhi Md. Tallaabo.
Md. Tallaabo waxa uu aad carabka ugu adkeeyey in Somaliland iyo Itoobiya ay yihiin laba dal oo aan kala maarmi Karin, �Abaal gaar ah oo aan waxba loo dhigi Karin waxa leh Itoobiya dlakan Somaliland-na saaxiib iyo hooyaba way u yihiin ilaawina mayno abaalkooda� ayuu hadalkiisa ku soo ooday.
Ugu dambayn, waxa Munaasibaddii guddoonsiinta koobabka labada Kooxood ka hadlay Madaxa Xafiiska Diblomaasiyadeed ee Itoobiya ay ku leedahay Somaliland, Mr. Abdaja Daribsa, waxaana uu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay Ciyaartan dhexmartay labada ciidan, �Waxaanay noqonaysaa tallaabo wanaagsan oo sii xoojisa xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya.
Waxaan rajaynaa in kooxo ciyaartoy kale ah oo Itoobiyaan ahi ay Somaliland u yimaadaan ciyaaro saaxiibtinimo,� ayuu yidhi, waxana uu intaa raaciyay mahadnaq uu u soo jeediyay Dawladda Somaliland, waxanu yidhi; �waxan ugu mahadnaqayaa dawladda Somaliland ee sida diiran u martigelisay ciyaartoyga Itoobiyaanka ah ee jidkaa dheer u soo maray sidii ay uga qayb geli lahaayeen ciyaartan saaxiibtimo.�
Posted at 01:40 pm by SNN reporter RAMBO
"Haddii ay Majeerteeniya ka bixi weydo Xuduudaha Somaliland waxa aanu kaga saari doonaa Xabad"
�HADDII AY MAJEERTEENIYA KA BIXI WEYDO XUDDUUDA SOMALILAND WAXA AANU KAGA SAARI DOONAA XABAD� Wasiirul Dawlaha Arrimaha Gudaha Somaliland.
urco(SNN)Wasiirul Dawlaha Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Aadan Maxamed Mire (Waqaf), oo hadda booqasho hawleed ku jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, ayaa sida uu qoray saaka Wargeyska Maandeeq, shalay mar uu Wasiirku dadweynaha reer Burco kala hadlayay Munaasibadii Salaadda Ciida sheegay in Xukuumadda Somaliland ay ka go�an tahay Sugitaanka Xuduudaha Dalka Somaliland, isla markaana waxa uu Wasiirku xusay in Xuduudaha Somaliland ay yihiin kuwo aan gor-gortan geli Karin,
�Xukuumadda Somaliland waxa ka go�an Sugitaanka Xuduudaha Dalka, Xuduudeenu waa mid ay Beesha Caalamku ogtahay haddii ay Maamulka Majeerteeniya ka bixi waayaan Xuduuda Somaliland waxa aanu kaga saaraynaa xabad�. Ayuu yidhi Md. Waqaf.
Wasiirul Dawluhu waxa uu shacbiga reer Togdheer ugu baaqay inay u diyaar garoobaan difaaca qarankooda Somaliland, waxaana uu Wasiirku si faahfaahsan shacbiga uga waramay Xaaladda ka Aloosan gobolada Sool iyo Sanaag Bari ee ay isku hor fadhiyaan Ciidamada Somaliland iyo Puntland, waxa kale oo uu Md. Waqaf shacbiga reer Togdheer gaadhsiiyay Salaan uu uga siday Madaxweyne Rayaale.
Posted at 02:00 am by SNN reporter RAMBO
SALAADDA CIIDDA IYO SOMALILAND:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> CIID WACAN OO WANAAGSAN DHAMAANTIINBA "
MADAXWEYNE RAYAALE OO SHACBIGA HARGEYSA KALA QAYB GALAY TUKASHADA SALADDA CIIDA.
ar(SNN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin iyo ku xigeenkiisa Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, ayaa saaka dadweynaha magaalada Hargeysa kala qayb galay Tukashada Salaada Ciidal Udxa.
Madaxweyne Rayaale iyo ku xigeenkiisa oo ay Weheliyeen Raxan Wasiiro ah, waxa ay Masjid Jaamaca Hargeysa kula tukadeen Kumanaan qof oo Shacbiga Hargeysa.
Madaxweyne Rayaale, oo la filayay Khudbadda Munaasibadda Ciida inuu kaga hadlo guud ahaan Xaaladda dalku marayo gaar ahaan xaaladda ka Aloosan gobolada Sool iyo Sanaag Bari, ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yidhaahdo. Balse waxa uu jeediyay Khudbad Gaaban oo Duco iyo Salaan ah, waxaana uu Md. Rayaale hadalkiisa ku bilaabay,
�Asalamu Calaykum Waraxmatulaahi Wa-Barakaatuhu. Allaahu Akbar�Allaahu Akbar. Halkan waxaan ka salaamayaa Umadda reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan, Illaahayna waxaan uga rajaynayaa Barwaaqo, Bash-Bash, Horumar, Nabad sanadkan iyo Sannadaha Badan ee soo socda If iyo aakhirana inay noqdaan kuwa ku liibaan ayaan Illaahay uga rajaynayaa, iyaga [Shacbiga Somaliland] iyo dhammaan ummadaha Muslimka ah oo dhan, waxaan leeyahay Ilaahay Amni iyo Istiqraar Illaahay ha ina siiyo, inta buktana Illaahay ha Caafiyo, inta qabtana Alle ha u kordhiyo, kuwa wax haysta Alle ha u kordhiyo, kuwa aan haysana Alle faqriga ha ka saaro. Wasalamu Calaykum Waraxmatulaahi Wa-Barakaatuhu�.
Dadweynaha Magaalada Hargeysa oo ay Wejigooda ka muuqato Farxad iyo Rayn-Rayn ku aadan Munaasibadda Maalinta Ciida ayaa isugu soo baxay Wadooyinka Waaweyn ee Magaalada Hargeysa, iyaga oo labadii qof ee iska soo horbaxaaba ay isku salaamayeen CIIDI MUBAARIK�.CIIDAL CAAFIYA.
Magaalooyinka Ceerigaabo, Burco, Laascaanood, Boorama, Berbera, Gebilay, Bali-Gubadle, , Wajaale iyo kuwo kale oo SNN ay la xidhiidhay saaka ayaa iyana si weyn looga ciiday.
Bahda SNN, dhammaan Shacbiga Somaliland meel kasta oo ay joogaan waxa ay u dirayaan Hambalyo la xidhiidha Ciidal Udxa, waxaanay Eebe uga baryayaan inuu Sannadkan Sannadkiisa ku gaadhsiiyo, Nabad Gelyo, Horumar iyo Aqoonsi Diblomaasiyadeed oo ay ka helaan Beesha Caalamka.
Posted at 02:26 am by SNN reporter RAMBO
BOQOR BUUR-MADOOW OO MARKII U HORAYSAY DHAMBAAL KA SOO DHEX DIRAY JEELKA HARGEYSA
BOQOR BUUR-MADOOW OO MARKII U HORAYSAY DHAMBAAL KA SOO DHEX DIRAY JEELKA HARGEYSA.
B oqor Cismaan Aw Muxumed (Buurmadow) oo Ciidanka Boolisku xidhay habeenimadii Salaasadii ee toddobaadkan ayaa shalay markii u horreysay soo diray Dhambaal uu ka soo dhex diray Jeelka Weyn ee Hargeysa ee uu ku jiro hadda.
Boqor Cismaan Buur Madow oo Dhambaalkan u soo gudbiyay Wargeyska Jamhuuriya oo maalin walba ka soo baxa magaalada, waxa uu ka waramay xadhiggiisa, sidii Ciidanka Booliisku ula dhaqmay markii la qabanayay, iyo horgayntiisa Maxkamadda ee shalay, iyo weliba saamaynta uu xadhiggiisu ku yeelanayo Somaliland.
Qoraalka Boqor Cismaan waxa uu u dhignaa sidan:
�Xadhigaygu wuxu u dhacay si ka baxsan sharciga dalka iyo Dastuurkaba, waxa si guure ah iigu soo dhacay Taliyaha Booliska isaga ayaana shandadahaygii ku baadhay gacantiisa, wuxuu la cararay dhokomentiyo aan haystay kuwaas oo aan la tusin Oobiigii (OB- �Occurance Book�) iyo markii laybaadhayay.
Ka warami maayo sidii foosha xumayd ee layla dhaqmay habeenkii u horreeyey oo aan ku seexday gogol la�aan markii Taliyuhu amray xadhigayga codsigii gogashana uu diiday. Waxa laygu xidhay meel ka caagan bini�aadamka in lagu xidho oo ka mid ah Saldhigga dhexe. Aniga oo aaminsan in aan leeyahay xurmo wayn, Dastuurkuna dhigayo ilaalinta xuquuqda Muwaadinka haba yaraatee layma marin wax sharci ah.
Xataa huteelkii lama odhan cidbaanu rabnaa ee weerar baa lagu soo qaaday ii qolkaygii. Markii aan Taliyaha ku idhi, wax sharci ah oo laygu xidhayo ma haysaa !!? Wuxuu yidhi sharci qudha wax laguma xidho!, waxaan idhi haddaa ina mari haddii ay tahay sharci darro.
Subaxnimadii shalay, 28kii bisha, Arbaca, waxa la ii geeyey Xaakim u eg Geellihii [Guddoomiyihii Maxkamaddii Badbaadada ee Siyaad Barre] kacaankii oo aad ballan u qaba. Waxaan u sheegay in aan ku faraxsanahay in la i keeno Maxkamad sharci ah, wuxu igu yidhi waxa lagugu eedaynayaa qoraal. Waxaan u sheegay in aan qoray Maqaal anigu aan cid wax ku eedeeyey; xaakim miyaanu sharcigu ahayn marka eedayntayda la dhegaysto, Xaakimkana ay u muuqato dembi in la i xidho. Wuu ka aamusay.
Xaakimka waxaan ka codsaday wixii dhac iyo sharci darro ah in la i soo celiyo, waxaan u sheegay in aanan Eedaysane ahayn ee aan anigu wax eedaynayey waxa qudha ee dembi igu qaban karaa waa aniga oo waaya waxaan sheegay. Go�aan wuxu ku dhammaaday Bilayska ayaa codsaday. Hadda waxa qudha ee dembi ah ee aan galay, malaha, waa nabadda aan dawladda ka wada hadlaynay oo aan weliba ku idhi toddoba cisho haddii aanu xal ku keeni wayno dawladda ayaanu barbar taaganahay.
Aniga ima xidhin inan yar oo Baalashle ah, waxaan u xidhanahay waa la ogyahay. Waxaan leeyahay wixii aan qoray wax been ahi kuma jiraan, ee Rayaale isaga oo masuuliyaddiisa qiimaynaya ha beeniyo oo Joornaalka ha ku soo baxdo marka hore. Dabadeedna Maxkamad ha la geeyo. Aniga iyo Daahir mid uun baa kaga baxaya Masuuliyadda. Haddii kale, sidii Kilinton [madaxweynihii hore ee Maraykanka] ha calool adaygo illayn waa Madaxweyne�e oo ha yidhaahdo ��Waxaan dhuunta noo dhaafiniyo dhaar shil waa jiraye.��
Gebo-gebadii sharcigii dalka iyo anigaba waa lagu gefay; waxaan xaq u leeyahay in aan Looyar qabsado, iyo in aan xor ahay inta dembi igu caddaanayo. Illaa hadda wax baadhis ah oo aan aqbalay ma jirto, xataa kalmad, waxana sababay in aan diido sharci darrada. Waxaanan leeyahay Nabad-doonimadaydii la ii xidhay waxay dhib ku tahay Somaliland oo dhan. Waxaan ku faraxsanahay soona dhowaynayaa hannaanka ismaquuninta ah ee Maamulku Bilaabay.�.
Posted at 10:43 am by SNN reporter RAMBO
WASIIRKA WAXBARASHADA FINDLAND OO XAFIISKEEDA KU QAABISHAY XOGHAYAHA ARRIMAHA DIBADDA EE XISBIGA UCID EE SOMALILAND
WASIIRKA WAXBARASHADA FINDLAND OO XAFIISKEEDA KU QAABISHAY XOGHAYAHA ARRIMAHA DIBADDA EE XISBIGA UCID EE SOMALILAND.
W asiirka Waxbarashada ee Dalka Finland Marwo TUULA HAATAINEN, isla markaana xubin ka ah Baarlamaanka Dalka Findland ayaa shalay xafiiskeeda ku qaabishay Xoghayaha Arrimaha Dibadda xisbiga Caddaalada iyo Daryeelka Somaliland (UCID), Dr. C/raxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), oo hadda ku sugan dalka Findland. Sida uu ku soo waramay Mr. Maxamed Cabdillaahi, oo fadhigiisu yahay dalka Findland.
Xoghayuhu waxyaalaha uu waasiirka kala hadlay waxaa ka mid ahaa: Taariikhda Jamhuuriyadda Somaliland laga soo bilaabo xiligii dawlada ingiriisku ay gacanta ku haysay Somaliland ilaa iyo maanta oo ay mar labaad la soo noqotay xornimadeedii. Doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka ka dhacay iyo sidii habsamida iyo nabadgelyada ahayd ee dadweynaha jamhuuriyada Somaliland u codeeyeen iyo qorshaha loogu jiro doorashada Baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland ee inagu soo food leh, taasoo la filayo inay u dhacdo si ka wanaagsan doorashooyinkii ka horeeyay ee golayaasha deegaanka iyo madaxweynaha waayo waxaa dadweynaha uga kordhay dorashooyinkii hore aqoon.
Waxaa uu xoghayahu uga xog waramay wasiirka xaaladda nabadgelyo iyo horumar ee Jamhuuuriyadda Somaliland ee waqtigan xaadirka ah. Waxuu xoghayuhu kala hadalay wasiirka sidii ay suuragal u noqon lahayd iskaashi dhinaca tacliinta iyo tababarida ah oo Finland u fidiso Somaliland.
Waxay ka wada hadleen iskaashiga Xisbiga UCID iyo Xisbiga Finish Social Democratic Party ( SDP) Waxuu xohayuhu uga waramay wasiirka wafdigii baarlamaanka Ingiriiska ahaa ee Somaliland booqday iyo sida dawlada ingriisku hada u soo dhaweynayso arimaha Somaliland. Kuna buraarujiyay in Finlandna sidaas oo kale looga baahan yahay.
Waxaa kaloo ay wasiirka iyo xoghayuhu ka wada hadleen aqoon isweydaarsi ka dhaci doona dalka Finland dhawaan oo lagaga hadli doono arimaha Somaliland.
Posted at 04:04 pm by SNN reporter RAMBO